ဟဒီးဆ်: သူသည် စလာမ်လှည့်ပြီးသည့်အခါ ဆွလာသ်တိုင်း၏နောက်တွင် ဤသို့ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အတုမဲ့အနှိုင်းမဲ့၍ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုအပေါင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဟူသမျှသည်လည်း ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းအလုံးစုံကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကောင်းမှုများ ပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စွမ်းအားပေးသနားတော်မူခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ နိအ်မသ် စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့် ကျေးဇူးတရားအဖြာဖြာတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှသာလျှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ကာဖိရ်များ မနှစ်သက်ကြစေကာမူ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အိခ်လာဆွ်ဖြင့် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: သူသည် စလာမ်လှည့်ပြီးသည့်အခါ ဆွလာသ်တိုင်း၏နောက်တွင် ဤသို့ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အတုမဲ့အနှိုင်းမဲ့၍ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုအပေါင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဟူသမျှသည်လည်း ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းအလုံးစုံကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကောင်းမှုများ ပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စွမ်းအားပေးသနားတော်မူခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ နိအ်မသ် စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့် ကျေးဇူးတရားအဖြာဖြာတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှသာလျှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ကာဖိရ်များ မနှစ်သက်ကြစေကာမူ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အိခ်လာဆွ်ဖြင့် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဆွလာသ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဇိက်ရ်တော်များ။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်ဇုဗိုင်းရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)သည် စလာမ်လှည့်ပြီးသည့်အခါ ဆွလာသ်တိုင်း၏နောက်တွင် ဤသို့ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အတုမဲ့အနှိုင်းမဲ့၍ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မှုအပေါင်းကို ခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ချီးမွမ်းထောမနာခြင်းဟူသမျှသည်လည်း ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းအလုံးစုံကို စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကောင်းမှုများ ပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ စွမ်းအားပေးသနားတော်မူခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်တော်မူသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ နိအ်မသ် စည်းစိမ်အပေါင်းနှင့် ကျေးဇူးတရားအဖြာဖြာတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်ထံတော်ပါးမှသာလျှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ချီးမွမ်းထောမနာပြုခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာဖြစ်၏။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ မှန်ကန်သည့် ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍အလျင်းမရှိ။ ကာဖိရ်များ မနှစ်သက်ကြစေကာမူ ကျွန်တော်မျိုးတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အိခ်လာဆွ်ဖြင့် ခဝပ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ ထို့နောက် ၎င်းကပြောပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် ဆွလာသ်တိုင်း၏နောက်တွင် ၎င်းကလိမဟ်တော်များကို ရွတ်ဆိုခဲ့သည်။
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်ဇုဗိုင်းရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)သည် ဖရ်ဿ်ွ ဆွလာသ်၌ စလာမ်လှည့်ပြီးနောက် ဤကြီးကျယ်လှသောဇိက်ရ်တော်ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ယင်းဇိက်ရ်တော်တွင် ကြီးကျယ်လှသည့် အဓိပ္ပာယ်များ ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ စစ်မှန်သည့် ကျွန်ပီသခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တစ်ပါးတည်းအတွက်သာဖြစ်ရမည်ကို အတည်ပြုထားပြီး ချွတ်ယွင်းမှုအပေါင်းမှ ကင်းစင်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်အတူ ဖက်စပ်ယှဥ်တွဲသူရှိခြင်းကို ငြင်းပယ်ထားသည်။ ထို့အတူ အလုံးစုံသော စိုးပိုင်မှုအာဏာသည် အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်း၌သာတည်ရှိပြီး၊ ထိုအရှင်မြတ်သည်အခြေနေတိုင်းတွင် ချီးမွမ်းခြင်းကို ခံထိုက်တော်မူသောအရှင်၊ အကန့်အသတ်မရှိ စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို အတည်ပြုထားသည်။ ထို့ပြင် ဤတောင်းဆုတော်၌ ကျွန်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း၊ စွမ်းအားမရှိခြင်း၊ အရှင့်အကူအညီမပါဘဲ အန္တရာယ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ ကောင်းမှုကိုကျင့်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းစသည်တို့ကို မိမိအရှင်မြတ်ထံတော်၌ ဝန်ခံထားသည်။ ထို့ပြင် ဤမွန်မြတ်သော ဇိက်ရ်တော်တွင် စည်းစိမ်ချမ်းသာတို့သည် ၎င်းတို့ကို ချီးမြှင့်သည့်အရှင်မြတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့် အရှင်မြတ်၏အကြွင်းမဲ့ ပြီးပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုတင်ပြထားသည်။ ထို့အတူ မြင့်မြတ်တော်မူသောအရှင်မြတ်အား အရှင်မြတ်၏ ဇာတိတော်၊ဂုဏ်တော်များ၊အရှင်မြတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အရှင်မြတ်၏ စည်းစိမ်တော်များနှင့် အခြေနေတိုင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာသတိရ တသနေခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့နောက် ဤဇိက်ရ်တော်အား ကလိမဟ်သောင်ဝ်ဟီးဒ်“လာအိလားဟအိလ္လလ္လာဟ်” ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားခြင်းသည် ကာဖိရ်များအားလုံး မနှစ်သက် ကြလျှင်လည်း ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တစ်ဆူတည်းအတွက်သာသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် သတိပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက် အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်ဇုဗိုင်းရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟုမာ)က ပြောပြခဲ့သည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် ဆွလာသ်၌ စလာမ်လှည့်ပြီးသောအခါ ရွတ်ဆိုသည့် ကလိမဟ်တော်၏ စာသားများမှာ ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိနှင့်အတူ ရှိနေသူများကို သင်ကြားပေးရန်အတွက် ထိုကလိမဟ်တော်အား အသံကျယ်စွာ ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
1: ဖရဿ်ွဆွလာသ်တိုင်း၏ နောက်တွင် ပြည့်စုံလှသည့်ဂုဏ်တော်များ စုပေါင်းပါဝင်သည့် ဤဇိက်ရ်တော်များအား စွဲမြဲစွာဖတ်ရွတ်ခြင်းသည် မွတ်စ်သဟဗ်ဖြစ်သည်။
2: သာသနာ့ဝင်ရိုးသည် အိခ်လာဆွ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာ သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် တမန်တော်မြတ်၏ နောက်လိုက်ခြင်းတို့အပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဤအရာနှစ်ခုသည် အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ ထောက်တိုင်နှစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
3: ဆွဟာဗဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟွမ်)တို့သည် စွန္နသ်တော်များအား အကောင်ထည်ဖော်ရန်နှင့်ဖြန့်ချိရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
4: ကာဖိရ်များ မနှစ်သက်ကြလျှင်လည်း မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးသည် မိမိ၏သာသနာဖြင့် ဂုဏ်ယူပြီး သာသနာတော်၏ အထိမ်းအမှတ်များကို ထုတ်ဖော်နေရမည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း